Angovo mahery na angovo onja | Green Renewable
Angovo mahery na angovo onja
Daniel Palomino | | Angovo mahery, General, Tontolo_iainana
Ny onjan-dranomasina dia misy angovo be dia be nalaina avy tamin'ny rivotra, ka ny fanambanin'ny ranomasina dia azo zahana a mpanangona angovo mahery vaika.
Amin'ny lafiny iray, mitrandraka angovo avy amin'ny masoandro be ny ranomasina, izay mandray anjara amin'ny fivezivezin'ny onjan-dranomasina sy ny onja koa.
Onja dia onja mahery novokarina, araka ny efa nolazaiko, tamin'ny rivotra sy ny hafanan'ny masoandro, izay ampitain'ny alàlan'ny fanambonin'ny ranomasina ary misy fihetsika mitsangana sy mitsivalana ireo molekiola rano.
Ny rano manakaiky ny etỳ ambonin'ny tany dia tsy mihetsika fotsiny avy any ambony ka hatrany ambany, miaraka amin'ny fandalovan'ny tampon-tendrontany (io no ampahany avo indrindra, matetika feno tampoka) ary ny sinus (ny faritra ambany indrindra amin'ny onja), fa, amin'ny fivontosana malefaka, miroso ihany koa izy eo amin'ny tampon'ny onja ary mihemotra any an-tratrany.
Ny molekiola tsirairay avy dia manana fihetsiketsehana boribory somary boribory, miakatra rehefa manakaiky ny tendrony, avy eo mandroso miaraka amin'ny tendrony, midina rehefa mihemotra ao aoriana, ary mihemotra ao anaty onja.
Ireto onjan-kery eto ambonin'ny ranomasina ireto, onja, afaka mandeha kilometatra an-tapitrisany izy ireo ary amin'ny toerana sasany, toa ny Atlantika Avaratra, ny habetsaky ny angovo voatahiry dia afaka mahatratra 10 KW isaky ny metatra toradroa amin'ny ranomasina, izay maneho vola be raha raisinao ny haben'ny velaran'ny ranomasina.
Ireo faritra ao amin'ny ranomasina misy angovo avo indrindra voangona ao anaty onja dia ireo faritra any ankoatran'ny 30º latitude sy atsimo, raha mahery indrindra ny rivotra.
Amin'ity sary manaraka ity dia ahitanao ny fiovan'ny haavon'ny onja iray arakaraka ny fanambanin'ny ranomasina arakaraka ny fanatiny amin'ny tany
1 Mampiasa angovo onja
2 Mpiorina angovo onja eny an-dranomasina
3 Fampiasana onja
3.1 Ny rakitry Cockerell
3.2 Duck Salter
3.3 Airbag Lancaster University
3.4 Varingarina ao amin'ny University of Bristol
4 Fampiasana mivantana ny hetsiky ny onja
5 Tombony sy fatiantoka ny angovo angovo
Mampiasa angovo onja
Ity karazana haitao ity dia niasa tamin'ny voalohany ary nampiharina tamin'ny taona 1980, ary nahazo fandraisana tsara, noho io toetra azo havaozina, ary ny fahaizany mivelona fampiharana ato ho ato.
Ny fampiharana azy koa dia vao mainka azo atao eo anelanelan'ny latitude 40 ° sy 60 ° noho ny toetr'ireo onja.
Noho io antony io ihany, dia niezaka nandritra ny fotoana ela ny hanovana ny fivezivezena mitsivalana sy marindrano ho onja azo ampiasain'ny olombelona, ​​amin'ny ankapobeny angovo avy amin'ny rivotra, na dia nisy aza ny tetik'asa natao hanovana azy ho hetsika mekanika.
Tetikasa fanaovana mpisava lalana any amin'ny nosy Canary
Misy karazana fitaovana maro karazana natao ho an'ny tanjona toy izany, izay azo apetraka ao ny morontsiraka, eny ambony ranomasina na rendrika ao anaty ranomasina.
Amin'izao fotoana izao, ity angovo ity dia nampiharina tany amin'ny firenena mandroso maro, ka nahazoana tombony lehibe ho an'ny toekarenan'ireto firenena ireto, izany dia vokatry ny avo isan-jaton'ny angovo omena mifandraika amin'ny angovo ilaina isan-taona.
Any Etazonia tombanana fa manodidina 55 TWh isan-taona dia soloina angovo avy amin'ny fihetsiky ny onja. Io sanda io dia 14% amin'ny sanda angovo takin'ny firenena isan-taona.
Ary ao Eoropa fantatra fa manodidina 280 TWh Izy ireo dia avy amin'ny angovo vokarin'ny fihetsiky ny onja amin'ny taona.
Mpiorina angovo onja eny an-dranomasina
Amin'ny faritra aiza rivotra varotra (Ireo rivotra ireo dia mitsoka tsy tapaka amin'ny fahavaratra, amin'ny ilam-bolantany avaratra, ary kely kokoa amin'ny ririnina. Mivezivezy eo anelanelan'ny tropika izy ireo, avy any amin'ny latitude 30-35º mankany amin'ny ekoatera. hetsika mitohy mankany amin'ny onja, azonao atao manangana fitoeram-drano misy rindrina mitongilana ny beton izay miatrika ny ranomasina, izay ahafahan'ny onja misosa miangona ao amin'ny fitehirizan-drano eo anelanelan'ny 1,5 sy 2 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina.
Azo atao turbined ity rano ity, ahafahany miverina any an-dranomasina, hamokatra herinaratra.
Ny fiakarana sy ny fianjadian'ny onja, any amin'ny faritra sasany izay hampiharana an'ity haitao ity, dia kely dia kely, ka tsy hiteraka fitsabahana.
Any amin'ny faritra amoron-dranomasina izay ananan'ny onja be dia be ny fahefana, ny onja dia azo tarihin'ireo vatan-kazo vita amin'ny beton miharo amin'ny ranomasina misokatra, izay afaka mampifantoka saika ny angovo rehetra eo alohan'ny onja 10 kilometatra ny sakany amin'ny faritra kely 400 metatra ny sakany.
Ny onja amin'ity tranga ity dia mety hahatratra 15 ka hatramin'ny 30 metatra raha mifindra mankeny amoron-dranomasina, ka afaka miangona mora foana ny rano ao amin'ny fitehirizan-drano iray amin'ny haavo iray
Amin'ny alàlan'ny famoahana an'io rano io any amin'ny ranomasina, dia azo ampiasaina ny herinaratra amin'ny alàlan'ny fitaovana elektrika mahazatra.
Misy fitaovana isan-karazany amin'ity karazana ity.
Amin'ity sary manaraka ity dia azonao atao ny mahita ny iray izay nampiasaina teo amin'ny fampiharana ary nanome valiny mahafa-po.
Izy io dia rafitra iray hampiasana angovo onja izay tsotra ny asany ary misy ireto manaraka ireto:
Ny onja miakatra manangana tsindry rivotra ao anatin'ny rafitra mihidy. Mitovy tsy misy valaka amin'ny hoe manindry syringe isika.
Ny "valves" dia manery ny rivotra hamakivaky ny turbine ka mihodina izy io ary mampihetsika ny generator, ka mamokatra angovo elektrika.
Rehefa midina ny onja dia mamokatra famoizam-po amin'ny rivotra.
Ny valves dia "manery" ny rivotra hamakivaky ny turbine amin'ny làlan-kaleha toy ny tamin'ny tranga teo aloha ihany, izay iverenan'ilay turbinina ny fihodinana azy, mampihetsika ny generator ary manohy mamokatra herinaratra.
Io fitsipika io ihany dia nampiharina tao amin'ny Sambo Kaimei ampandehanin'ny turbine air compressed, tetik'asa iraisan'ny governemanta Japoney sy ny International Energy Agency.
Namokatra be ny valin'ity tetikasa ity, na dia tsy niparitaka be aza ny fampiasana azy.
Ny teknolojia mitovy amin'izany no nampiharina tato ho ato, fa ny fampiasana vatan-kazo lehibe mitsingevana, amin'ny tetik'asa natsangana tany Ekosy.
Misy fitaovana hafa koa manova ny hetsika miakatra sy miakatra ny onja hamokatra herinaratra toy ny:
Ny rakitry Cockerell
Ity fitaovana ity dia misy rakitry voarindra izay miondrika amin'ny alàlan'ny onja, ka manararaotra ny hetsika hitondra paompy hydraulic.
Ganagana an'i salter
Ny gana iray hafa fantatra ihany koa dia ny gana Salter, izay misy andiana vatana miendrika oval mitohy mifandimby mandroso sy mihemotra, rehefa "tratry ny onja".
Ny kitapo oniversite Lancaster
Ny kitapo an'habakabaka dia misy fantsom-bozaka matevina 180 metatra lava. Rehefa miakatra sy latsaka ny onja, dia alaina ao anaty efitranon'ilay kitapo ny rivotra mba hitarika turbine iray.
Varingarina ao amin'ny University of Bristol
Ity varingarina ity dia manana fikirakira mitovy amin'ny barika napetraka eo amin'ny sisiny izay mitsingevana avy hatrany eo ambanin'ny tany. Mihodina miaraka amin'ny fivezivezan'ny onja ny barika, misarika rojo mifamatotra amin'ny paompy hydraulic izay miorina amin'ny fanambanin'ny ranomasina.
Fampiasana mivantana ny hetsiky ny onja
Nosedraina rafitra hafa hampiasa mivantana ny fihetsiketsehan'ny onja sy ny onja.
Ny iray tamin'izy ireo, mifototra amin'ny fihetsiky ny feso sy trozona, azonao jerena amin'ity sary ity.
Ny fitsipiky ny fiasa dia tsotra ary misy ireto manaraka ireto:
Rehefa miakatra ny onja ary manosika loaka, izay azo afindra eo anelanelan'ny 10 sy 15º.
Manaraka izany, nahatratra ny fiafaran'ny dia ny finina ary nitohy niakatra ny onja, eto kosa misy tosika miakatra ataon'ny onja izay ovain'ny fofona ho tosika miverina.
Taty aoriana, rehefa midina ny onja, dia mampihetsika ny fin ho any ambany izy ary mitovy ny tranga niseho tamin'ny tranga teo aloha.
Raha manana rafitr'ity karazana ity ny sambo dia entin'ny vokatry ny onja tsy mandany habetsahan'ny angovo na kely aza.
Ny fanandramana fanandramana an'ity rafitra ity dia nahafa-po, na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza, ny fampiasana azy dia tsy namboarina ihany koa.
Tombony sy fatiantoka ny angovo angovo
Manana angovo angovo tombony be toy ny:
Izy io dia loharanon'ny angovo azo havaozina ary tsy mety ritra amin'ny olombelona.
Ny fiantraikan'ny tontolo iainana dia tsy misy, raha toa ka tsy misy rafitra afa-tsy ny fanangonana angovo onja eto an-tany.
Fampitaovana amorontsiraka maro no mety misy ampidirina ao amin'ny complexe port na karazany hafa.
Manoloana ireo tombony ananany Ny fatiantoka sasany, ny sasany manan-danja kokoa dia:
Rafitra fanangonana ny angovo onja amin'ny tany dia mety hanana tanjaka fiantraikan'ny tontolo iainana.
Saika azo ampiasaina irery any amin'ny firenena indostrialy, satria ny fitondrana onja ankasitrahana dia tsy fahita firy amin'ny Tontolo Fahatelo; Ny angovo Wave dia mitaky fampiasam-bola avo lenta ary fotodrafitrasa avo lenta izay tsy ananan'ny firenena mahantra.
Angovo onja na onja tsy azo vinavinaina tsara, satria miankina amin'ny toetr'andro ny onja.
Betsaka amin'ny ny fitaovana voalaza mbola manana tsy fetezana izy ireo ary miatrika olana ara-teknolojia sarotra izy ireo.
Ny fotodrafitrasa amoron-dranomasina dia misy fiatraikany lehibe hita maso.
Amin'ny fotodrafitrasa any ivelany dia tena izy io sarotra hampitana ny angovo vokarina any amin'ny tanibe.
Ireo fotodrafitrasa dia tsy maintsy mahazaka fepetra faran'izay mafy mandritra ny fotoana maharitra.
Ny onja dia manana tsela avo sy hafainganam-pandeha ambany, izay tsy maintsy ovaina ho lasa torela ambany sy hafainganam-pandeha avo zoro, ampiasaina amin'ny milina rehetra. Ity dingana ity dia manana fampisehoana ambany dia ambany, mampiasa teknolojia ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Angovo mahery » Angovo mahery na angovo onja
Ny ho avin'ny angovo, inona no miandry antsika?